तपाईंको स्टार्टअप व्यवसायका लागि ग्राहकहरू आकर्षित गर्न T युक्तिहरू - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B5B बजार समाचार
अप्रिल 13, 2021 अप्रिल 10, 2021 सियरा पावेल B2B, ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार, ग्लोबल थोक अनलाइन, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
छूट प्रस्ताव अफिस तपाईंको व्यवसाय लाई सार्वजनिक गर्न को लागी एक उत्तम तरीका हो।
टिभी जस्ता विधाहरू नयाँ स्टार्ट-अप व्यवसायको लागि धेरै महँगो पर्न सक्छ।
एक पेशेवर वेबसाइट ग्राहकहरु को लागी प्रभावशाली छ र सुरक्षा र विश्वास को भावना दिन्छ।
धैर्य प्रत्येक व्यवसाय को विकास को लागी महत्वपूर्ण छ।
१. छूट र नि: शुल्क सौदाहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्
तपाइँको केहि सेवाहरू वा उत्पादनहरू नि: शुल्क दिँदा सकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ। मानिस नि: शुल्क सामान मन पर्छ। तिनीहरूले छुटलाई केही नगद बचत गर्ने ठूलो अवसरको रूपमा देख्दछन्। छुटले मानिसहरूलाई योजना बनाएको भन्दा बढी उत्पादनहरू वा सेवाहरू खरीद गर्न प्रभाव पार्छ।
छूट प्रस्ताव अफिस तपाईंको व्यवसाय लाई सार्वजनिक गर्न को लागी एक उत्तम तरीका हो। छुट छ वा नि: शुल्क उत्पादनहरूको मजा लिने व्यक्तिको संख्या निर्णय गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैले नि: शुल्क सामानहरू लिनु हुँदैन। यसले उत्पादन वा सेवाहरूलाई अझ आकर्षक बनाउँछ।
२. नयाँ रणनीति अपनाउँदै
नयाँ रणनीतिहरू जुन परिवर्तनकारी व्यापारको मौसममा काम गर्न सक्दछ आवश्यक छ। सानो व्यवसायको लागि विज्ञापन र मार्केटिंग चुनौती हुन सक्छ। सहि सफ्टवेयर भएमा तपाईले यो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
टिभी जस्ता विधाहरू नयाँ स्टार्ट-अप व्यवसायको लागि धेरै महँगो पर्न सक्छ। इन्टरनेट को लागी धन्यवाद, अब यो हुनको लागि सस्ता तरीकाहरु छन्। राम्रो सफ्टवेयरले तपाईको दक्षता सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
एक अन्तर्-प्रयोग गरिएको तर धेरै महत्त्वपूर्ण रणनीति तपाईंको व्यवसाय प्रबर्धन गर्न घटनाहरू होस्टिंग हो। तपाईं घटनाहरू अनलाइन वा ब्यक्तिगत-लाई तपाईंको व्यवसायको बारेमा शब्द प्राप्त गर्न सहयोग गर्न होस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। घटना प्रबन्धन सफ्टवेयर घटना योजनाको साथ ज्यादै जान नपुगेका वा अझ व्यस्त भएकाहरूका लागि यो सजिलो बनाउन मद्दत गर्न अवस्थित छ।
सामाजिक मिडिया ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी एक शक्तिशाली उपकरण हो।
Social. सोशल मिडियामा जानुहोस्
सामाजिक मिडिया ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी एक शक्तिशाली उपकरण हो। सामाजिक मिडियामा विज्ञापन सस्तो र कहिलेकाँही नि: शुल्क पनि छ। समयको साथ सोशल मिडिया प्रयोग बढेको छ। सामाजिक मिडिया मार्फत, तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको बिक्री बढाउन सक्नुहुन्छ।
राम्रो समाचार सामाजिक मिडिया मा मार्केटिंग किफायती छ। अन्य परम्परागत विधिहरूको तुलनामा, यो सस्तो छ। थप रूपमा, वर्तमान महामारीको प्रतिबन्धको साथ, तपाईं आफ्नो घरको आराममा विज्ञापन गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सामग्री आकर्षक, आकर्षक र मूल्यवान छ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले एक सक्रिय सोशल मिडिया उपस्थिति राख्नुहुन्छ। तपाइँको ग्राहकहरुलाई एक राम्रो समीक्षा छोड्न प्रोत्साहन दिनुहोस् र यसलाई अनुसरण गर्न तपाईको पहल गर्नुहोस्। अघिल्लो सफलता साझा गर्नुहोस्, जस्तै तपाईंको ग्राहकहरूबाट सकारात्मक समीक्षा। प्रमाणपत्रहरू तपाईंको ग्राहकहरूमा विश्वास खेती गर्ने एक उत्तम तरिका हो।
Your. तपाइँको वेबसाइटको उपयोग गर्नुहोस्
भइरहेको एक वेबसाइट तपाईंको व्यवसायको लागि सर्वोपरि हो। एक पेशेवर विशेषज्ञ भाडा तपाईंको लागि एक सिर्जना गर्न यदि तपाईंलाई थाहा छैन कसरी। एक पेशेवर वेबसाइट ग्राहकहरु को लागी प्रभावशाली छ र सुरक्षा र विश्वास को भावना दिन्छ। यो मोबाइल फोनको लागि सहज छ र नियमित रूपमा अपडेट गरिएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्। थप रूपमा, तपाईंको वेबसाइटमा एक सामाजिक बटन समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
M. मुखको वचन
मुखको वचन सबैभन्दा प्रभावकारी मार्केटिंग रणनीति हो। यो वफादार ग्राहकहरू प्राप्त गर्न उत्तम तरिका हो। व्यक्तिले साथीहरू र प्रियजनबाट सिफारिसहरूमा विज्ञापनको कुनै पनि अन्य रूप भन्दा बढी विश्वास गर्दछ। त्यसकारण कुनै पनि व्यवसायको सफलताको लागि ग्राहकको सन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण छ।
परम्परागत रूपमा, मुखको शब्द एक व्यक्ति बाट अर्को सिफारिस मार्फत फैलियो। आज, सामाजिक मिडियाको साथ, व्यक्तिहरूले आफ्नो ब्रान्ड अनलाइन मार्फत उनीहरूको सन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्दछन्। एकल सन्तुष्टिले महत्त्वपूर्ण असरहरू गर्न सक्दछ, र विपरित पनि ठीक हो।
मुखको वचनले तपाईंलाई कमोड मात्र होइन एउटा समुदाय निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ। ग्राहक खुशी फैलिन सक्छ। तपाईंको ग्राहकहरूलाई खुशी पार्ने निम्न तरिकाहरू छन्:
ग्राहकहरु संग आफ्नो संचार निजीकृत। तपाईको ग्राहकहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा व्यवहार गर्नुहोस्, समूह होइन।
सबै प्रतिक्रियालाई जवाफ दिनुहोस्। चाहे सकारात्मक हो वा नकारात्मक, ग्राहकहरूले तपाईंलाई उनीहरूको विचारहरूको ख्याल गर्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ।
इमानदार हुनुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सेट अपेक्षाहरू प्राप्य छन्। अत्यधिक-आशाजनक बेवास्ता गर्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईका उत्पादनहरू राम्रो गुणवत्ताका छन्
ग्राहकहरुको राय सोधेर उनीहरूको सहभागिता लाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्।
नोट गर्नुहोस् कि पहिले नै अवस्थित ग्राहकहरु अझ महत्त्वपूर्ण छन् तपाईसंग नभएको ग्राहक भन्दा। तसर्थ, नयाँ ग्राहकहरु को लागी पीछा नगर्नुहोस् र को लागी याद गर्नुहोस् कि तपाईको पहिले नै छ। यदि तपाइँ तपाइँका ग्राहकहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ भने, तिनीहरूले तपाइँको व्यवसायको बारेमा ख्याल राख्छन्।
धैर्य प्रत्येक व्यवसाय को विकास को लागी महत्वपूर्ण छ। राति केहि पनि हुँदैन। यसले कडा मेहनत, बिरामी र राम्रो योजना लिन्छ। तपाइँको लक्षित दर्शकहरूलाई चिन्नुले तपाइँको धेरै समय र पैसा बचत गर्दछ।
चित्रित छवि स्रोत: Pexels.com
व्यापार सांप्रदायिक समाचार ग्राहकहरु शुरू